Indonesia in Focus: Iningi izindawo ozithandayo izivakashi Indonesia.
Iningi izindawo ozithandayo izivakashi Indonesia.
The ride wawungakapheli (377)
(Ingxenye amathathu namashumi ayisikhombisa nesikhombisa), Depok, West Java, Indonesia, September 27, 2015, 1:32 pm).
Ngaphezu esiqhingini Bali, Indonesia ibonakala charm enhle izivakashi izingosi ngisho nangokwengeziwe amahle kuwufanele kakhulu ukuvakashela futhi ngeke kukhohlakale izivakashi abangakaze bavakashela, phakathi kwabanye okuningi:
Marine Park Raja Ampat, Papua Ukuze zabo ezitholwe abatshuzi futhi abathanda kwamanzi emhlabeni park, ipharadesi diving ukuthi presents ingcebo eziphila olwandle amazing. Omunye ezikhangayo edume kunazo Raja Ampat zasolwandle park. Le ndawo ubizwa njengoba Coral Reef sePharadesi noma epharadesi izixhobo zama-coral by abatshuzi kwezwe. Indawo Luhambo Raja Ampat Marine Park Itholakala West Papua.
Raja Ampat kuyinto esifundeni entsha esigabeni wilaya esifundeni slide ububanzi kanye amahektha million 4.6. Balinganiselwa 85% of the indawo ingqikithi olwandle, kanti esele iqembu leziqhingi nezixhobo iziqhingi iziqhingi ezingaba 610. Of the amakhulu iziqhingi umhlanga iziqhingi 35 kuphela kuhlala abantu bomdabu.
Raja Ampat Islands nje kuphela ababebhekwa njengabavikeli into Nature Indonesia ngesimo the park ngobukhulu zasolwandle e Indonesia, kodwa futhi okukholakala ukuthi ingcebo eziphila olwandle kule emhlabeni. Zembula Izikhangibavakashi panoramic Raja Ampat park zasolwandle waqala lapho i Dutch inkosi kazwelonke diver okuthiwa Maxx Ammer wavakashela kule ndawo ngo-1990.
Izikhangibavakashi Raja Ampat zasolwandle park yisici coral yingcebo eziphila olwandle kule emhlabeni, okungenani 1300 zezinhlanzi, 600 zama-coral 700 zama-izimbaza, ingasaphathwa izinhlobo ezahlukene izimfudu, ulwelwe kanye jellyfish. The ingcebo enkulu kulo lonke zamakhorali emhlabeni unxantathu endaweni, okungukuthi ePhilippines, Indonesia, futhi Papua New Guinea.
Njengoba sazi nobubanzi zasemanzini ezikhangayo Papua Raja Ampat zasolwandle park futhi ezihlukahlukene ocebile eziphila olwandle, bese ungakhetha iphuzu ukuqala dive. Emhlabeni esiqhingini Kri, ungabona ubuhle coral nezinhlobo eziningi zezinhlanzi okuyinto emangalisayo, kuhlanganise nezinhlobo eQueensland grouper, pompano, snapper, grouper, zamakhorali oshaka, tuna, napoeleon wrasse, Barracuda, futhi trevelly giant.
Ezenye amabala dive e Luhambo Papua Raja Ampat zasolwandle park at the Sardine Reef nge ka-10 amamitha ukujula. Le ndawo ukhonza ezihlukahlukene izinhlanzi, kuhlanganise parrotfish lapho kufanele egqamile. Uma ufuna ukuzama ukuthi kunjani ukuba emhubheni rock, ungakwazi ungene ezizungeze iziqhingi Kaboei Bay Rock. Kunabantu Cove phansi emhubheni rock. Kaboei Bay Rock futhi wathola coral emihumeni kuhlale amalulwane ole, futhi kwezinye izindawo atholakala izinsalela amathambo womuntu.
Ziningi nezinye izindawo dive e Luhambo Papua Raja Ampat Marine Park ungakwazi ukuhlola, ezifana The uMzila, Fam Island, futhi isiqhingi Misool. Ngaphandle ujabulela ingcebo eziphila olwandle, ungakwazi futhi ujabulele izindawo zomlando ngaphansi kolwandle, kuhlanganise yempi futhi combat bezindiza ukuthi sasisibi amanzi Luhambo Papua Raja Ampat zasolwandle park. Akukona nje kuphela ukuthi, nawe futhi ungakwazi ukujabulela ubuhle eziqhingini esifundeni Luhambo Papua Raja Ampat zasolwandle park in a isimo acwebile, Lagoon, kanti bay namanje livikelwe, has a elula emabhishi emangalisa futhi crystal amanzi olwandle ecacile.
Wena nesithakazelo ngokuvakashela ezikhangayo Papua Raja Ampat Marine Park kungenziwa basuka Jakarta noma kwamanye amadolobha lelikhulu Domine Eduard Osok, Sorong, West Papua. Izindiza kusuka eJakarta Sorong ngokuvamile umphakathi Makassar noma Manado. Ibhayisikobho Domine Eduard Osok, ungakwazi ngokushesha uqhubekele ezikhangayo Raja Ampat zasolwandle epaki kweqembu izikebhe fast berkafasitas 10 abantu ngemali cishe USD 3.2 million indlela ngamunye for 4 amahora.
No ithikithi ekhethekile ukungena endaweni amanzi ezikhangayo Raja Ampat zasolwandle park. Nokho, izindleko ukuqasha isikebhe motor, imishini ababhukudi futhi abafundisi esukela emakhulwini ezinkulungwane izigidi uRupiah kwelinye dive. Inqubo Diving ngokuvamile eyenziwa izikhathi eziningi ukujabulela izindawo dive zihlukile. Ngakho, kuba ababhukudi kuyancomeka babuthanela ukucindezela lemali kwemali okuyinto kuqhathaniswa ezibizayo.
Regional ezikhangayo Papua Raja Ampat park zasolwandle, ungakwazi ukuthola izindawo ezanele zikhona ezinye zokungcebeleka, ezifana esiqhingini Kri, Waigeo, Mansuar, futhi Misool. Abanye zokungcebeleka ukusetha intengo kuqhathaniswa eqolo ngoba siveza Facility ephelele. Uma ufika nge budget ephansi, yokungcebeleka kahulumeni kungaba okukhethwa kukho.
Enye ehlukile ukujabulela ezikhangayo Papua Raja Ampat zasolwandle siqiwu ngokukhetha ukuhlala esikebheni kanye isikebhe waqasha Pinisi lapho kushintshiwe ngqo imisebenzi diving izinsuku ezimbalwa. The umkhumbi esiphezulu kafasitas abantu 14 ngemali ka-90 million ku-110 million for a cruise isonto lonke.
Njengoba omunye park lokuqala lasemkhunjini emhlabeni, ubuhle emhlabeni kwamanzi of bunaken, Manado North Sulawesi baziwa emphakathini international, ikakhulukazi scuba abatshuzi. Empeleni, ngo-2005, bunaken isibe indawo eyigugu emhlabeni emva uhulumeni Indonesian ukubhalisa bunaken ukuba UNESCO. With an indawo cishe 75 625 amahektha, abathanda diving basuke spoilt ngabaningi dive endaweni. Bunaken Marine Park has a 20 iphuzu dive ibala, 12 abangabamemezeli esiqhingini bunaken. Inani dive amabala esingambona ukwandisa kanye nenombolo yezingubo sibuka ubuhle kwamanzi of bunaken.
Of the 20 iphuzu dive endaweni, intandokazi kakhulu phakathi kokunye eLulwimini Village, Lekuan, Fukui Point, Mandolin ponit futhi East bunaken. The angabatshuzi edamane vakashela bunaken dive endaweni has a intandokazi ezahlukene. Ngokwesibonelo, i diver othanda ukuba ungene oshaka endaweni babe ozithandayo ezahlukene abatshuzi abathanda ufuna imisebe Manta. Bezithombe Underwater seahorses happy ngifuna, cuttlefish Flamboyant, kanye nezinye Macro ifotho izinto ezikhona ngaphansi kolwandle.
Izinga ukubonakala emanzini ifinyelela 20 amamitha, ngezinye izikhathi, uma sengisuthi level ezinhle ukubonakala singafinyelela 35 amamitha. Ungabona ubuhle coral of bunaken Marine Park, okuyinto omunye the best in the world. Kunezinhlobo cishe 390 zama-isixhobo is amazing. Berlekak-dent shape kuphela imifantu phezulu emhumeni encane noma emhubheni ngaphansi kolwandle ukuthi angeke ezitholakala kwezinye izindawo.
Derawan island etholakala leziqhingi of Derawan, Derawan izifunda, izifunda berau, North Borneo, unit Derawan island morphology kuyinto bertopografi flat elisogwini. Sand beach has a emthambekeni mayelana 7 ° - 11 ° nge ububanzi amamitha 13.5 kuya 20.
In the amanzi ezungezile kukhona epaki zasolwandle kanye odumile njengoba diving izivakashi (diving) nge likhula libe amamitha ukujula. Kukhona anhlobonhlobo eziphila olwandle lapha, ezifana squid (cuttlefish), ama-lobster, fish pipe (ghostpipe fish), octopus (octopus bluering), nudibranchs, ulwandle ngamahhashi (seahorses), umbokwane ribbon (ribbon eels) nezinhlanzi skorpion (Scorpionfishes ).
On a idwala a amamitha ayishumi ukujula, kukhona kwamanzi eyaziwa ngokuthi "blue udonga inhlamvu" ngoba zamakhorali nge ubude 18 meters a lot of inhlamvu fish (red-toothed trigger fishes).
Derawan kuyinto An siqhingi shades olwandle-ezinemibala of imibono blue and green, isihlabathi esimhlophe soft, imigqa wamasundu ogwini, kanye ehlathini elincane phakathi isiqhingi okuyinto engokwemvelo ekwakhekeni kwezinhlobo ezahlukene zezitshalo nezilwane kanye ubuhle bemvelo ngezansi ocean obumangalisayo. Ungamangali uma kulesi siqhingi kungase phezulu ezinhlwini third njengoba lomhlaba diving ukuphela futhi wenze lokhu island esiqhingini iphupho for abatshuzi.
Emhlabeni island Derawan, njengoba abaningi 28 iphuzu dive ukhonjwe. Ukuze ukuhlola konke lokhu phuzu okungenani kuthatha 10 days omunye dive iphuzu ngalinye. Ukuze asuka kwelinye iphuzu eya kwelinye, izivakashi angasebenzisa imikhumbi. Khonamanjalo, izivakashi futhi ukuhlola isiqhingi behamba ngezinyawo.
Dr. Carden Wallace of Museum ezishisayo Queensland, Australia uye wahlola yasolwandle ingcebo Derawan island futhi ubhekane nokungaphezu kokubuzwa 50 izinhlobo arcropora (izilwane zasolwandle) e izixhobo zamakhorali. Akekho sibonakala uma Derawan island idume njengoba esiphezulu ingeyesithathu emhlabeni njengoba i international dive ukuphela.
Izixhobo zamakhorali leziqhingi of Derawan okusakazekile sonke isiqhingi futhi ushiswe e Derawan leziqhingi. Hirst ezinezinyawo kulezi ziqhingi zihlanganisa Long Island ushiswe, masimbung elihangukile, buliulin angqongqa, pinaka ushiswe, zihangulwe futhi angqongqa tababinga muaras.
Reef uhlobo in Derawan leziqhingi siqukethe fringing, barrier zamakhorali kanye iziqhingi. Lokhu esincane esiye benziwa isiqhingi futhi kwakheka echibini saltwater. "Manta donsa hlola 2003" ikhombisa cover isilinganiso izixhobo zama-coral e-island eside 24,25% kuya 34,88 for zamakhorali aqinile futhi ukuphila zamakhorali. Izixhobo zamakhorali esiqhingini Derawan ine isilinganiso coral cover zamakhorali aqinile 17,41% kanye 27,78% zamakhorali bukhoma cover. With the number of zinhlobo 460 kuya 470 kusikisela ukuthi lokhu kube ingcebo biodiversity yesibili emva Raja Ampat qoqo leziqhingi.
Coral Reef izindawo main:
ubude ingxenye esentshonalanga yalesi siqhingi (itheku kanye channel)
muaras nge ukwehluka lelisetulu zamakhorali, zamakhorali value enempilo futhi yobuhle
zamakhorali malalungun, ukuhlukahluka ephakemeyo isakhiwo eyinkimbinkimbi nge ezihlukahlukene ezihlala
Izindawo ende zamakhorali-rich
Reef fish ucwaningo ngo 2003 wabonisa ukuthi lesi siqhingi ikhiqiza 832 zinhlobo. Ngaphezu kwalokho, kulinganiselwa kukhona okungenani 1.051 zinhlobo emanzini berau kanye gobes zinhlobo okudlangile (Gobiidae), wrasse (Labridae), kanye damselfishes (Pomacentridae).
Ngezinye izikhathi lapho ehlezi ekupheleni the ibhuloho lezingodo eholela olwandle, singakwazi ukubona izimfudu eziluhlaza nasemuva phezu kobuso nasemanzini. Uma diving nathi sihambisane izimfudu ukuthi ukubhukuda ezisizungezile. Ngezikhathi ezithile ngisho izimfudu ukuthi kubonakale zululeka emhlabeni cottage itholakala ogwini lwalesi siqhingi. At kuhlwe, abanye izimfudu yakhwela osebeni bese zizalela amaqanda abo khona.
Izivakashi zingase futhi ubuyekeze nezinye iziqhingi emhlabeni Derawan. Ngokwesibonelo: Accounting Island, Maratua, futhi isiqhingi kakaban ukuthi ine ehlukile yayo siqu. Blue Stingray (imisebe Manta) oselufinyelele 3.5 amamitha labantu ububanzi esiqhingini Accounting. Eqinisweni, lungatholwa-uma lucky ngokwanele, Stingray black kanye ububanzi "namaphiko" amamitha 6. Nakuba lesi siqhingi sinamabandla a kakaban esiyingqayizivele ngesimo lake komlando phakathi kolwandle, lowo kuphela Asia.
Zinhlobo ejwayelekile futhi avikelwe ukuthi ingatholakala phakathi izinkalankala kakhukhunathi (Birgus latro), imikhomo, namahlengethwa (Delphinus), ufudu green (Chelonia mydas), hawksbill (erethmochelys fimbriata), kanye dugong (Dugong dugon). Coconut izinkalankala ingatholakala kwi kakaban siqhingi Maratua. Pope ingatholakala azungeze lesi siqhingi Maratua ngesikhathi esithile, kanti namahlengethwa azungeze lesi siqhingi Semama, Accounting, kakaban, Maratua, futhi muaras ushiswe.
Turtles ingatholakala azungeze Long Island, Derawan, Semama, Accounting kanye Maratua futhi inama-dugong e Long Island and Semama. Olunye uhlobo eyingqayizivele imisebe Manta (manta birostris) esisogwini esiqhingini Seahorse Accounting kanye pigmy esiqhingini Semama kanye Derawan.
Facilities And Indawo
Derawan sihlinzeke ezifana Cottages, dive gear, izikebhe ezinesivinini futhi zokudlela. Derawan island futhi uhlinzeke yokuhlala ukuthi akuyona eqolo kakhulu lapho iphethwe bendawo.
Lezi zindlu kukhona juts elula cishe 100 metres olwandle ukwenza abakhileyo kungaba ngokukhululekile ukubona ezihlukahlukene izinhlanzi ezimibalabala nezimfudu ezidlulayo ngokukhululekile ngaphandle kokuphazamisa muntu. The menu ukudla ilula kakhulu nge menu okudlangile main of fish sea nokudla okusemathinini ngokuqinisekile akusho luthunaze ukuthabela emkhathini imini nobusuku kulesi siqhingi.
Ukuze uthole esiqhingini Derawan, izivakashi zingathola fly cishe 3 amahora Balikpapan, East Kalimantan, ngendiza kusukela Jakarta, Surabaya, Yogyakarta noma Denpasar.
Ibhayisikobho Aberdeen, kusadingeka ukuba fly ukuba Cape Redeb ihora dive elilodwa ngendiza, Kal Star, Deraya noma Das. Ngaphezu kwalokho, Cape Redeb kungabuye kwafinyelela olwandle, kanye begibela kusukela Samarinda, inhloko-dolobha yaseMpumalanga Kalimantan Tarakan, inhloko-dolobha North Borneo ukuba Cape Redeb elandelwa liqashe esikebheni.
Kwekuheha esiqhingini Lombok.
Lombok, West Nusa Tenggara (labantu 2001: abakhileyo 2,722,123) kuyinto island in the Wokuba Omncane Sunda Islands noma Nusa Tenggara zihlukaniswe the Lombok Strait of Bali e Sebelat Alas Strait ngo entshonalanga nasempumalanga Sumbawa. Isiqhingi cishe uyisiyingi nge uhlobo "umsila" on the ntshonalanga side of a ubude cishe 70 km. Le ndawo island ekufinyeleleni 5.435 km², ngesizotha lifaka 108 out of the uhlu iziqhingi kusekelwe ngezinga kwezwe. The idolobha elikhulu lakulesi siqhingi Mataram.
Lombok Island idume ngobuhle bemvelo of the exotic and elithakazelisayo. Lombok siqhingi iziqhingi ezintathu Gili hhayi kuphela. Ngaphezu Gili Trawangan, Gili Air futhi Gili Meno. Lombok island usenayo ezinye Dyke ngokulinganayo amahle. Omunye empumalanga Gili Kondo kuphela etholakala esiqhingini Lombok.
Lombok Island manje usengomunye zezimpawu ezokuvakasha Indonesian, ubuhle balesi siqhingi okwesibili none e Indonesia, izihambi Sasak abantu, ubuhle emabhishi ukuthi kukhona lomlungu, izixhobo zamakhorali futhi ukujula begazi ongavamile, ubukhazikhazi eNtabeni rinjani namasiko ehlukile Sasak izimemo eziningi ngabathanda izivakashi ezifuywayo kanye angaphandle.
Ubuhle esiqhingini Lombok futhi eksotismenya akumeme futhi umlingani wakho kukankosikazi lapha. Ngokufanayo Exotisme Gilis Island uyophinde bakumema ukuba ujabulele ubuhle balesi siqhingi.
Lokhu siqhingi esinye seziqhingi ezimbili ezinkulu ephethwe esiFundazweni West Nusa Tenggara. Ubuhle landscape, okwenza lesi siqhingi of Lombok ukuba omunye honeymoon ukuphela nalo efiselekayo. Uma une ukwazi lapho izinyawo kufanele bandisa, ubuhle Lombok ingahlolwa lolu hambo.
With emabhishi kahle imilingo, ngokubabazekayo Mt rinjani futhi umbukwane eziphila olwandle ukuthola, esiqhingini Lombok e West Nusa Tenggara has eziningi izivakashi kokubili ezweni olwandle. Akumangazi-ke ukuthi iyona izindawo ethandwa kakhulu West Nusa Tenggara.
Just vakashela lapha ukuzizwa amagagasi Surf big ogwini oluseningizimu. Inselele GUTS yakho ukukhuphuka phezulu mlilo. Ukuqasha isithuthuthu isithuthuthu ukuhamba ezitaladini ezigudle amasimu erayisi. Okhunye ufuna isikhathi meghabiskan, ngeke udumazeke ngobuhle umbukwane yemvelo lapha.
Ezenye izivakashi Lombok ukukhetha ukuchitha isikhathi sabo esiqhingini Gili-Gili, isiqhingi esekusithekeni elishisayo emabhishi kukhona esikuyo omangalisayo futhi zikanokusho.
The kwezakhamuzi zokuqala Lombok kukhona Sasak, Lombok ubuye ekhaya kubantu Hindu of Bali futhi eziningi Chinese, isi-Javanese, Bugis futhi Arabhu.
Abanye abantu Sasak bamukela Islamic ukholo Wektu telu didefinisikann ngokuthi "Islam kathathu" ebhekise imithandazo yabo kathathu ngosuku bese ehlukene kanye namaSulumane abathandaza 5 izikhathi ngosuku. Wektu telu nkolo eliyingqayizivele sihlanganisa amasiko asendulo nezinkolelo Islamic, lezi zinkolelo zitholakala kuphela North Lombok. Labo ibhekane le nkolelo bangamaSulumane kodwa ngesikhathi esifanayo ibhekane nemikhuba yamasiko. Izibonelo ezifana Nyiu nomcimbi emva eziyikhulu ngezinsuku umuntu efa. Imindeni abantu abafa izipho like izingubo, izixubho nokudla ukuze umuntu abafileyo ngeke kube ezolile ezulwini.
Ezenye imikhosi engokwenkolo kugujwa ekuqaleni kwenkathi yemvula (October kuya December) noma inkathi yokuvuna (April-May) lokugubha emizaneni sonke leso siqhingi.
Sasak isiko kubaluleke kakhulu amandla namakhono ngokomzimba futhi eziningi amasiko endawo mereflesika lokhu isiko. Peresehan kuyinto isiko lendawo ehlanganisa impi phakathi amadoda amabili owasebenzisa umhlanga eside futhi encane isihlangu emise yezinyoni bujung of cowhide.
Umculo nomdanso zibalulekile kakhulu Sasak isiko. Badansa a dance bendzabuko ngesikhatsi emikhosini ebalulekile. Lokhu dance livela impi dance, ezifana Beleq drum (big drum) kuze Cupak Gerantang elithandwayo utshela indaba yothando kanye romance.
Vakashela esiyingqayizivele Pura Lingsar, inhlanganisela Balinese Hindu amathempeli nezinkolelo Wektu telu kwelinye eziyinkimbinkimbi.
Around futhi besithengela ezimakethe Surandi umuzi skyline. Kukhona ezinye lovely epikinikini amabala ukuze uphumule futhi baphumule.
Hlola inhlanhla yakho nge ukuvakashelwa emjahweni in the Salakalas ensimini. The ubanjelwa njalo ngeSonto. Buka bamakamela abasha emncintiswaneni Friend entanjeni lapho Abashadikazi abazowina, kuzolalelwa memberika smile victor. Lokhu uhlanga kubaluleke kakhulu kangaka ebusuku ngaphambi uhlanga, bakule ndawo ngeke uhlikihla amahhashi abo, futhi ngezikhathi ezithile udlala gamelan umculo ukukudambisa amahhashi.
Inselele GUTS yakho ukukhuphuka eziphakeme eNtabeni rinjani. At an engamamitha ayi kuka 3,700 ngaphezu kolwandle, lokhu ngokubabazekayo mlilo intaba ekhuphuka kuzothatha izinsuku okungenani ezintathu futhi hhayi Kunconywa for abantu iziyaluyalu inhliziyo. Uma iziqongo ukukhathala uzokhokhelwa yi zemvelo landscape Indonesia ephawulekayo.
Zizwe esisogwini ematheni ezinyawo zakho kanye zasemanzini elikhazimulayo ezisogwini kuleli laseNingizimu Kuta Lombok. Isihlabathi White futhi umbukwane ocean ukubukwa lapha benza le ndawo njengendawo yezivakashi evamile banana. Vakashela Nyale Ukudoba Kuta ngomkhosi waminyaka, ngokuvamile owawuse-February noma ngo-March futhi ujabulele celebration futhi odwendweni ngombala.
Beachkuva evule emabhishi amahle ka Batu Bolong. Lokhu beach ithatha igama lawo amatshe amakhulu kanye izimbobo phakathi. Qiniseka uzizwa ilanga lilihle liyoshona ngokungavamile lapho ilanga yaze yathi ayizike entabeni Agung Bali ngemibala Amazing yelangabi.
Funda ngomlando wendawo futhi uvakashele Meruya Water Palace ngo Mataram, inhloko-dolobha yakwa Lombok. Le ndawo lakhiwa 1744 futhi phambilini obuwaziwa kwaba impi onegazi phakathi Netherlands kanye izakhamuzi Bali ngasekupheleni kwekhulu le-19.
Sithole ukuthula ethempelini ngobukhulu Lombok, Pura Meru, eliqhele ngemuva Park Water. Ithempeli, okwaphela amakhulu eminyaka kuthiwa elalinikezelwe Hindu Trimurti of Brahma, Vhisnu, futhi Shiva.
Indawo ukuhamba ngendiza kungenziwa othathwe Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bali, emzini ka Mataram.
City of Bukittinggi, West yeSumatra umuzi zomlando, idolobha okwazalelwa heroes ezintathu olukhulu Indonesia, futhi umuzi ebukekayo izivakashi exoticism. Bukittingggi babe zonke izidingo zokunikwa ukuba abe amatsha izivakashi for the izivakashi. In the city owenza December 17 njengosuku lokukhumbula yalesi kukhona Clock Tower okuyinto ebaluleke kakhulu emzini, esifuze umlando bamakoloni iminyuziyamu Minangkabau namasiko futhi Bung Hatta Palace.
Lwekuphatfwa Bukittinggi usuqalile ukwakha in the Dutch sebukholoni. Dutch wenza Bukittinggi njengoba Gemeentelijk Resort noma abanye omasipala Gazette ezinze 1828 kanye 32 nezinye Gemeentelijk Resort in Indonesia. Lokhu isimo kwenza Bukittinggi uma kakade Gemeenteroad noma uhulumeni ezizimele iningi kumele alawulwe nguMnyango Dutch. In Singapore futhi yasungula inqaba okuthiwa "Fort De Kock". The Fort namanje umsulwa futhi lokukhonza njengomunye ezikhangayo yomlando. Lo muzi ubizwa nangokuthi esetshenziswa Izinduna Dutch abakhuluphele emakoloni empumalanga kuya ukuphumula.
Ngesikhathi umsebenzi Japanese, Bukittinggi iqanjwa kusukela Fort de Kock Taddsgemente kube Bukittinggi Si Yaku Sho ne kwalokho kuyini manje District Agam. IJapane futhi yasungula ngomsakazo isiqhingi esikhulu kunazo zonke yeSumatra ngenxa ze. Futhi ngokusho uhulumeni wendawo, the Japanese ibuye yenze Singapore njengoba 25 wamabutho ukulawula amabutho empi ESumatra, Singapore eThailand.
Ngemva ukuzimela Indonesia, Bukittinggi ungalokothi bakhonze njengamaphayona umzabalazo central ukuzivikela ukuzimela. Ngisho December 1948 kuze June 1949, eLondon sasetshenziswa njengophawu dolobha Emergency Government of the Republic of Indonesia (PDRI) eholwa Mr. Sjafroedin Prawiranegara. Isinqumo esikhishwe uMongameli emva eyawa Yogyakarta ezandleni eNetherlands ngenxa yimpi II. Emva kwalokho Bukittingti eyabizwa ngokuthi dolobha yeSumatra, futhi ngo-1959 wenza dolobha Central yeSumatra. Ngemva ukuthuthukiswa West yeSumatra, Bukittinggi bakhonze njengamaphayona dolobha West yeSumatra ngaphambi ekugcineni ngo-1978 wayiswa emzini Padang.
Bukittinggi ebanzi ukufinyelela cishe 250.239 km2 ehlanganisa amagquma nezigodi. Izintaba asezindaweni New York City uchungechunge entabeni chain ibhande. Ohlangothini sentaba, umuzi futhi lizungezwe tida entabeni Mount Merapi, entabeni Singgalang, futhi entabeni Sago. The khona ezintabeni ezintathu Yingakho New York City yaziwa nangokuthi eMzini Tri arga. Ukumisa indawo Bukittinggi elinezintaba futhi kukhona ngenhla 900 m LwaseMelika (ngaphezu kolwandle), okwenza emoyeni New York City futhi cool.
Tourism bezikhali Bukittinggi, West yeSumatra kulesi sibalo kahulumeni wasekhaya, zaba cishe 30% wemali engenayo inani (Regional Original Revenue). Ngokuqinisekile akumangalisi, ngoba lungaba ezokuvakasha edolobheni kuqhathaniswa ephelele. Nature ezokuvakasha Bukittinggi into osekelwa phambi amagquma azungeze umuzi. Emkhathini esivamile ezintabeni air cool kwenza Bukittinggi kungaba ukukhululwa ukucindezeleka izivakashi. Emkhathini Green of the landscape sentaba ubuye kakhulu efanelekayo abathandi izithombe bamatshe. Ubuhle iso edliwayo uma izivakashi babe edolobheni esigodini.
Njengoba omunye izikhungo of Minangkabau isiko, Bukittinggi prototypes samanje Minangkabau isiko. Custom amakhaya, pakaiaan, lolimi cuisine ejwayelekile zingatholakala Bukittinggi. Cishe wonke amagumbi, Bukittinggi abakhona gadang izindlu ejwayelekile Minangkabau isiko. The izindlu ngobunono ngaphakathi izinyathi uphondo uphahla ezimise. Kulezi zindlu, izivakashi zingathola nezinto ezinhle ukujabulela ezitsheni bafaniswe Minangkabau ezisohlwini ezindongeni zendlu. Abantu balapha namanje sebenzisa bendabuko Minangkabau kwansuku izingubo.
Isimo of ekuseni edolobheni Bukittinggi futhi uzizwa ekhethekile. Sunrice izwe kanye sky blue basemadolonzima kuhlangene ngalé amagquma afaneleka kakhulu ezifanele ukuze isetshenziswe njengendlela display. Nokuzwa ezinjalo kungaba okubhekiswe kuzo zonke iziqondiso ikhampasi. Ikakhulukazi uma Ebusuku, kunomkhosi, izibani umbala kulokoza kanye iziqhumane luvame emzini Bukittinggi.
Esinye isici ukuthi ingatholakala izivakashi e Bukittinggi iseduze umhosha zemvelo ezikhangayo Sianok. Ibanga Bukittinggi kanye Sianok umhosha angafinyelelwa by ezweni cishe kwamahora amathathu. On the way izivakashi futhi ayeke by ukujabulela ezikhangayo Clock Tower, yindawo Ford de Kock, kanye emihumeni amagugu Japanese zamakoloni. Not ukukhohlwa, esinye isici Bukittinggi kukhona indlela izinto emazombezombe. In Bukittinggi ekhoneni owaziwa noma Lwalugobile 44 ampek amabili ampek ukuze uthole Lake Maninjau. Ukuhamba nxazonke ekhoneni sizonikeza omunye umuzwa, ikakhulukazi izivakashi abathanda ukushayela.
City of Bukittinggi kuyinto umasipala oyedwa etholakala esifundazweni West yeSumatra. Ngokwendawo, usendaweni degrees 100,210 ukuba 100,250 longitude empumalanga naphakathi 00 760 - 00,190 LS. Uma sezithombe enhlokodolobha West yeSumatra of Padang, Bukittinggi itholakala cishe 90 km mpumalanga.
Ukufinyelela emzini London kungafinyelelwa kusukela emadolobheni amaningi e West yeSumatra. Uma usebenzisa ekhuluma, izivakashi bangasebenzisa cross-yeSumatra road osuka isifundazwe Lampung kuya nad. Medium, izivakashi abasebenzisa umzila air, izivakashi angasebenzisa iphuzu ukuxoshwa e Padang eminye seeked Army. Njengoba for the ezikhangayo eziningi emzini Bukittinggi izivakashi angasebenzisa izindlela ezahlukene zokuthutha zomphakathi ayatholakala nombala in Bukittinggi
E. Indawo and Umphumela Facilities
Ukuze basekele emkhakheni wezokuvakasha okwamanje London kukhona izingcezu 43 kokubili hotel star kanye nesabelomali plus 11 mes / guest house / cottage. The khona yokuhlala anjalo ubuye ukusekela indima Singapore njengoba base ekhaya kwezokuvakasha esifundazweni West yeSumatra.
Njengoba for the restaurant kanye yokudlela, eLondon zokudla atholakalayo futhi zokudlela, ikakhulukazi esifundeni, Los Lambuang. Kule ndawo, izivakashi pamper ukunambitheka kwabo efihlekile kanye nemiculo ukudla Minangkabau. Budebuduze endaweni Los Lambuang, futhi eduze ezikhangayo, izinhlaka travel amaningana futhi alungele ukukhonza izivakashi uhambo. Izindaba Medium and isikhumbuzo yezitolo, endaweni Los Lambuang inikeza ezihlukahlukene eziyisikhumbuzo futhi eziyisikhumbuzo kusuka Bukittinggi.
Uthi bewazi ukuthi Bandung eziningi ezikhangayo ukuze ukuvakashelwa efiseleka kakhulu. Ngakho ngokuzayo uma siya Bandung ukuzama ukuyeka by the izivakashi ekhona ngezansi:
Abavakashela Bandung City:
Gedung Sate Bandung futhi Gasibu
Kwabanye Isikhumbuzo - Jl. Dipatiukur
Park Traffic - Jl. YeSumatra
Park Asebekhulile - Jl. Cisangkuy
Office Uhulumeni Park Bandung
Museum of Conference Asian-African
Square and Grand Mosque - Jl. Asia Africa
Tourist amabala North Bandung:
Forest Park Dago Pakar Cave kanye Netherlands / Japan
Omabonakude Boscha Star - Lembang
Market Slovakia - Lembang
Flower Garden Cihideung - Jl. USergeant Bajuri
UMoya Camp; Sahabat Alam - Jl. USergeant Bajuri
Tourist amabala South Bandung:
Zokudlala Rancaupas - Ciwidey
Isikhungo Baths Ciwalini - Ciwidey
Kukhona Cipanunjang - PANGALENGAN
Ibhayisikobho Gunungpadang - West Java
Abavakashela Bandung West:
Shoes and Bags Cibaduyut isikhungo
Lime emagqumeni - Padalarang
Cave Pawon - West Java
Abavakashela East Bandung:
Cangkuang Temple and Kampung Pulo - Garut
Region Special of Yogyakarta kuyinto yizivakashi enkulu Java, Indonesia, ne eziningi charm okuye kwembulwa.
Eminyakeni eyinkulungwane edlule, Yogyakarta laliyisikhungo yombuso wasendulo Mataram echumayo has a impucuko eliphezulu. Lo mbuso ngubani wasungula Borobudur ithempeli ithempeli ngobukhulu Buddhist emhlabeni, eminyakeni 300 ngaphambi Angkor Wat eCambodia. Enye ethempelini yezivakashi prambanan Temple, Istana Ratu Boko Sigodlo, kanye inqwaba yezinye emathempelini usubuyiselwe noma basaqhubeka wangcwatshwa ngaphansi komhlabathi (bheka Wisata Candi).